Kukhunjulwe abadlali bebhola eGcilima | News24
Kukhunjulwe abadlali bebhola eGcilima
ISITHOMBE : SITHUNYELWE Izingane nezihlobo zalabo ababengabadlali beGcilima Aces ababekhunjulwa
Bekubanjwe indumezulu yomcimbi wokubungaza abadlali beqembu lebhola lezinyawo iGcilima Acese asebadlule emhlabeni. Lomcimbi wabe ubanjelwe ehholo lomphakathi iGcilima hall ngeSonto eledlule.
Kulendumezulu kwabe kukhona amalunga omphakathi omphakathi Kanye nezihlobo zalabo ababengabadlali abaqavile asebalala kobandayo. Abanye babadlali baleliqembu asebabekha izicathulo zebhola ethala babeyingxenye yalesisikhumbuzo.
Unkosikazi wesikhulu esesalala u-Ian Mavundla ekhuluma ngomuyeni wakhe uthe oKaMavundla wakhombisa okukhulu ukubaluleka kwezemidlalo endaweni waphinde wakhombisa intsha ukuba kumele izimisele kangakanani uma idlala ibhola lezinyawo ngaoba belingathuthukisa indawo liphinde libakhiphe ezidakamizweni.
Umnumzane naye owake waba isikhulu saleliqembu ekhuluma ubeke ukuthi maningi amaqembu abamba iqhaza ekutheni kuthuthukiswe ezemidlalo endaweni kodwa wabalula ukuthi i-Aces yaba isibonelo esihle kakhulu entsheni kanye nasekugdugduzeleni imfundo endaweni.
Isikhulu selinye lamaqembu endawo nawesigodi sakwaXolo Martin Ngcungama wancoma iqhaza eladlalwa i-Aces wagcizelela ukubaluleka kokuthi umphakathi usebenzisane. Isithunywa esabe siqhamuka emnyangweni wezempilo sagqugquzela umphakathi ukuba ungabi namahloni okusebenzisa imishanguzo wesifo seNgculazi nesandulela sayo. Saphinde nxenxa umphakathi ukuthi uzihlolele izif ezifana noshukela, ikhensa Kanye nesifo sofuba.
Ekhulumela abakwasidlodlo uKapteni Musa Mboyisa wathi ezemidlalo zineqhaza elihle kakhulu emphakathi ukwehlisa izinga lobugebengu. “Abalandeli bebhola bayazi ukuthi eSoweto kunamaqembu amabili ekade aba yizimbangi Amakhosi (Kaiser Chiefs) namaBhakaniya (Orlando Pirates) nakhona eGcilima yi-Aces ne-Peacemakers,” kubeka yena. Wathi nakuba bekuba khona ukungaboni ngasolinye ngesikhathi kudlalwa ngenxa yokungafuni iqembu lakho lihlulwe kodwa bekwenza isimo sibesihle endweni futhi kubekhona uzinzo.
Owayekhulumela i-Peacemakers uZilo Mqadi wathi ukujabulela kakhulu ukuthi kube nomcimbi wokubungaza lamaqhawe angasekho. Wathi lomcimbi kade kungowukuqala futhi kufuneka ukhule eminyakeni ezayo.
Ekhulumela imindeni yabadlali asebalala uZwane Langazane obonge kakhulu ukuthi lomcimbi wenza bangakhohlwa asebaba mathambo mhlophe. Ekade bedlalela i-Aces o-Klembe Xama, Shisa Ngcungama and Simphiwe Ngcungama bawubonge kakhulu umphakathi nemindeni nezihlobo ngokuba yingxenye yomcimbi ukukhumbula laba ekade bedlala nabo ibhola.